Iifoto zedipozithi: Iifoto zeRoyal ezingenakufikeleleka zeSitokhwe ezinokuBheka ukuKhangela imifanekiso! | Martech Zone
Iifoto zedipozithi: Iifoto zeRoyal ezingenakufikeleleka zeSitokhwe ezinokuBheka ukuKhangela imifanekiso!
NgoMgqibelo, uJanuwari 2, 2021 NgoMgqibelo, uJanuwari 2, 2021 Douglas Karr
Sisebenzisa itoni Iifoto zesitokhwe ezingenasimahla. Ukusuka kwiisayithi zethu, iiposti zebhlog, amaphepha amhlophe, kunye nawo wonke umxholo esiwenzela abathengi, i-stock photo bill yethu yayingamakhulu eedola ngenyanga. Kubonakala ngathi kwakamsinya nje ukuba ndiyigcwalise iakhawunti, ayizukufumana nto ngaphakathi kweveki okanye njalo. Sihlawule amaxabiso aphezulu ngesiza esaziwayo sesitokhwe.
Imifanekiso yasimahla, okanye yeRF, vumela ukusetyenziswa okulinganiselweyo kwemifanekiso ngaphandle kwesidingo sokuhlawulela usetyenziso ngalunye. Umzekelo, ukuba sithenga umfanekiso ongenasimahla kwindawo yethu, singayisebenzisa ngaphezulu nakwindawo yethu nakwisibambiso sethu (kuxhomekeke kumthengisi). Nangona kunjalo, asinakuthengisa okanye siyisebenzisele abathengi bethu. Kwaye ukuba siyisebenzisela abathengi bethu, asinakho ukuyisebenzisela nezibambiso zethu. Lumka kakhulu xa ufunda ushicilelo oluhle ekusetyenzisweni! Ezinye zenzelwe ukungasetyenziselwa urhwebo, ezinye zinamaxesha okanye inani lokusetyenziswa kunqunyelwe.
Ukuba wophula imigaqo yokusetyenziswa kwimifanekiso yakho yasimahla, unokuhlatywa yileta evela kumnini wamalungelo. Bahlala befuna amakhulukhulu okanye amawaka eedola ukubuyisela ukusetyenziswa gwenxa… kwaye basongele ngokwasemthethweni ukuba awuthobeli. Uninzi lwabantu lufunda nje isifundo, luhlawule ityala, kwaye uqhubeke.
Ixabisa malini iRoyal Free-Stock Stock Photos?
Kukho uluhlu olubanzi lweendleko zeefoto zesitokhwe kwaye uninzi lwamaqonga asebenza kwinkqubo yamanqaku. Kuya kufuneka uguqulele iikhredithi kwiidola. Ezinye ziisenti ezimbalwa, kuxhomekeke kubungakanani bomfanekiso… ezinye zinokuba ziidola ezininzi kumfanekiso ngamnye. Kwaye ezinye iindleko ngendleko zomfanekiso ngamnye ngokusetyenziswa!
Khange sikhathalele ukuhlawula kakhulu njengoko besisenza kuba besisazi ukuba imifanekiso eqatha ibaluleke kangakanani kuyo yonke into esiyenzayo. Abantu bayijongela phantsi impembelelo yomfanekiso omhle onawo kumyalezo abazama ukunxibelelana nawo. Kwaye abantu abasebenzisa ukuKhangela kweMifanekiso kuGoogle kwaye baxhomekeke kukhangelo lwayo lwasimahla bafuna inkathazo! Amaxesha amaninzi umfanekiso usetyenziswa gwenxa kwaye ukuKhangelwa kweMifanekiso kuGoogle kuwufumana kwindawo yokusetyenziswa gwenxa, kubonisa ukuba awunantlawulo xa ungekho.
Kuyinyani… Umfanekiso ufanele ixabiso lamagama aliwaka
Siphila kwihlabathi elibonakalayo. Ke ukuba uzimisele ukuhlawula amakhulu eedola ngomxholo, ukutyala imali kumfanekiso omhle akukho ngqondo! Kwaye iDepositPhotos zongeze nje isixhobo sokuGuqulwa komfanekiso kumxube wabo! Ngaphandle kweefoto, zikwabonelela:
Imifanekiso yeVector -Fumana isiqalo sentloko kuyilo lwe-whitepaper okanye i-infographic ngeeseti zabo ze-iconography kunye nezinye imifanekiso ye vector.
imizekeliso -Ayidingi vector? Khuphela nje ifayile ye Imizekeliso engenazirhafu udinga.
Videos -Ufuna ukufaka ividiyo yesitokhwe semvelaphi kwindawo yakho okanye ividiyo yesitokhwe kumxube wakho wevidiyo olandelayo? Banokhetho olukhulu.
Iifoto zoHlelo -Ukukhangela imifanekiso ethile engeyiyo eyorhwebo? Banokhetho olukhulu lweempawu zohlobo lophawu kunye nosaziwayo ezinokusetyenziselwa umxholo wokuhlela.
umculo -Udinga umculo wepodcast okanye ividiyo kunye ne-outro? Banokhetho olukhulu ngokunjalo!
Kude kwafika iqela Depositphotos Nxibelelana nam malunga nebhlog yethu kunye nokusebenzisa kwethu iifoto zesitokhwe endiqonde ukuba sisebenzisa imali eninzi kakhulu kunokuba sinokuba nayo. Iidiphozithi ngoku ngumxhasi wethu kwaye sinikezela ngeefoto zethu zesitokhwe Martech Zone kunye nezinye iinkampani zam. Ngelixa sisivumelwano esingakholelekiyo kuthi, amaxabiso akho ayamangalisa nawe!
Ngezantsi njenge- $ 29 ngenyanga, ungasebenzisa ukuya kuthi ga kwi-30 Imifanekiso esitokhwe simahla inyanga nganye ukusuka kwiidiphozithi! Lixabiso elingenakuthelekiswa nanto elilungileyo kwishishini eliqhelekileyo elivelisa iiposti zebhlog, amaphepha emhlophe, izifundo zetyala, ukubizela ezenzweni, uyilo lwewebhu kunye namaphepha okufika! Yongeza ifoto yasimahla yesitokhwe kumyalezo wakho kwaye uya kubona ukuba ziya kuba ziphuculwe kangakanani iziphumo zakho!
Ukubhengezwa: Sisebenzisa eyethu uqhagamshelwano Iifoto zedeposithi kule post!
tags: iifotofumana imifanekiso kwi-intanethiUphendlo lomfanekiso kaGooglemfa nekisophinda ujonge umfanekisorfubukumkani abukhululekangaIifoto zesitokhwe ezingenasimahlaUmxhasiiifoto zesitokhwe